Ciyaaro – GEELLE MAG
Ciyaartii Final-ka aheyd ee u dhaxeysay degmooyinka Waaberi iyo Dharkeynley oo baaqatay
Cali Axmed Posted On October 24, 2019
Ciyaartii kama dambeysta aheyd ee la filayey in ay caawa ka dhacdo Garoonka Kubadda Cagta ee Eng.Yariisow Ex-Banaadir Stadium ee u dhaxeysay degmooyinka Waaberi iyo Dharkeynley ayaa baaqatay, sida ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Banaadir. Cayaarta ayaa lagu waday in […]
Kooxda Chelsea oo guul dirqi ah ka gaartay Kooxda Newcastle United
Kooxda Kubadda Cagta Chelsea ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Kubadda ah ee Newcastle United garoonkeeda Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga adkaatay guul 1-0, kulankooda 9-aad ee horyaalka Premier League-ga. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray […]
Xidigo muhiim ah oo laga reebay Safka kooxda Man United ee kulanka AZ Alkmaar
Cali Axmed Posted On October 3, 2019
Paul Pogba ayaa laga saaray kooxda Manchester United ee wajaheysa AZ Alkmaar kulanka khamiista ee Europa League-ga. United ayaa u safreysa Holland kulanka labaad ee group-yada tartanka Europa League-ga. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa isna ka hor tagi doona kooxdan, […]
Ronaldo oo shaaciyay waqtiga uu ka fariisanayo Kubadda Cagta
Cali Axmed Posted On October 1, 2019
Cristiano Ronaldo wuxuu muteystay inuu qof walba ka fakiro goorta ay tahay inuu soo idleeyo mustaqbalkiisa, iyadoo super star-ka Juventus uu hoos u dhigay tilmaamo kale oo ku aadan qorshihiisa howlgabnimada waqtigan. Da’diisa waa 34, ciyaartoy kasta oo kubada cagta […]
Manchester United oo dooneysa inay lasoo wareegto Christian Eriksen
Cali Axmed Posted On September 29, 2019
Kooxda Kubadda Cagta ee lagu magacaabo Manchester United ayaa isku dayday saxiixa Eriksen xagaagan laakiin kuma qancin inuu ciyaaryahanka uu usoo dhaqaaqo Old Trafford. Xiddiga reer Denmark ayaa loo maleynayaa inuu door bidayo u dhaqaaqista Spain, iyadoo Real Madrid iyo […]
Tababare Mourinho oo doonaya inuu ku laabto Real Madrid
Tababaraha reer Portugal ee lagu magacaabo Jose Mourinho ayaa ku guuleystay La Liga iyo Copa del Rey seddexdii xilli ciyaareed ee uu joogay Santiago Bernabeu intii u dhaxeysay 2010-kii iyo 2013-kii. Wuxuu ka tagay caasimada Spain markii ay isku dhaceen […]
Manchester United ayaa ka badbaaday cabsi ay kaga hari laheyd tartanka League Cup-ka kadib markii ay ku badiyeen 5-3 rigoorayaal ah , halka West Ham ay guul darro 4-0 ah ka soo gaartay Oxford. Kooxda dhibtooneysa ee uu hogaamiyo Ole […]
Real Madrid Oo Guul lama Filaan ah Gaartay
Dhibaatada Real Madrid ayaa u muuqata mid lagu xaliyay waqtigii ugu yaraa ka dib markii ay 2-0 ku garaaceen xalay kooxda Osasuna, iyada oo ay ka maqanayeen xitaa Eden Hazard iyo Gareth Bale. Hazard iyo Bale ayaa ka mid ahaa […]
Tababare Pep Guardiola Oo Difaacay Bernando Silva
Cali Axmed Posted On September 25, 2019
Tababare Pep Guardiola ayaa difaacay Bernando Silva kaasoo loo heysto inuu Twitter-ka ku cunsuriyeeyay xiddiga ay isku kooxda yihiin Benjamin Mendy. Xiriirka kubada cagta Ingiriiska ayaa warqad u qoray Manchester City oo ay ku weydiisanayaan in sharaxaad dheeri ah laga […]
Yaaku Guuleysan Doona Abaalmarinta Xiddiga Sanadka ee FIFA?
Saacado kooban ayaa naga xigta in aan ogaano ciyaaryahanka la siin doono abaal-marinta xiddiga sanadka ee loo yaqaano The Best, taasoo uu bixiyo Xiriirka Kubadda Cagta Adduunka ee FIFA. Xiriirka kubadda Cagta Adduunka ee FIFA ayaa caawa ku qaban doono […]